जमरामा जुसमा पाउने पौष्टिक तत्व हुने तर, तीतो नुहुँने भएकोले प्रयोग जुसको रूपमा सकिन्छ । यसमा अर्गानिक र सोडियाम हुने भएकोले जलवियोजनको समस्या भएकाहरुलाई निकै फाइदा गर्छ । शरीरका जोर्नीहरुमा जम्मा हुने क्याल्सियमपन घोलिन मद्दत गरी नसाहरु सन्तुलित राख्छ ।
जमराको जुस सेवन गर्दा स्वास्थ्यमा फाइदा गर्छ । खासगरी मुख तथा दाँतसम्बन्धी समस्या हटाउन, रगतमा चिनीको मात्रा नियन्त्रित गर्न, पाचन यन्त्र बलियो बनाउन, कलेजोलाई स्वस्थ्य राख्न गहुँको जमरा उपयोगी हुन्छ ।
कसरी जुस बनाउने ? कति पिउने ?
– आठदेखि दश वटा गहुँको जमरा जरामै काटेर राम्ररी धुने । त्यसपछि यसलाई कुटेर रस निकाल्ने ।
– अब एक सफा कपडामा त्यसलाई राख्ने र निचोर्नुपर्छ । यसको रस कुनै गिलासमा राख्नुपर्छ ।
– यो जुसमा थोरै तुलसीको रस मिसाउन सकिन्छ । साथै मह र अदुवा पनि मिश्रण गर्न सकिन्छ ।
– यो जुसमा थोरै पानी मिसाउनुहोस् । अब जुस पिउन सकिनेछ ।